FAQ - impompo Sand, sump Pump, grabile Pump yoMvelisi
imodeli ezahlukileyo ixabiso ezahlukeneyo .Siya khetha imodeli ngokwe-iparameters ukunikeza. yaye ngoko caphula benze pls yokuqala contract .Ngokunjalo ukulungisa imida.
Hayi, musa ukuba ubuninzi order ubuncinane. ngamanye amaxesha kuphela ufuna kuthwala eJozi ukuba uthotho lwakho, ngoko pls kuqala khangela intlawulo impahla kunye forwarder yakho.
Ewe, sibe igqiza elomeleleyo abasakhulayo. Ezi mveliso kwenziwa request.you bakho uthumele kum umzobo kwaye singenza njengoko nganye.
Ewe, singakwazi ukubonelela amaxwebhu uninzi kuquka Iziqinisekiso Uhlalutyo / akahambelani; inshorensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu kumazwe apho required.also umzobo ulwandlalo niwele zokuzoba yecandelo.
Kuba iisampuli, ixesha yipeyinti malunga 7 iintsuku. Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu ukhokelo azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi bakwazi ukwenza so.we ezininzi iindawo lolaleliso stock thina, ngoko ngamanye amaxesha ixesha kwezidingo nzima.
ukuba kwezinye iindawo, sinikela iwaranti ngonyaka omnye, kodwa iindawo desensitised, ngokuqhelekileyo kuya kuba .Oku 3-6months kuxhomekeke kwimeko yokusebenza ezahlukeneyo
Ewe, sisoloko ukusebenzisa kwizinga eliphezulu kumazwe packaging.we sele uku rhweba oku phantse iminyaka eli-16, ngoko ke, musa nizixhalele iphakheji.